Cele nwes – Shan Ma Lay
Category: Cele nwes
September 16, 2021 aung aungLeaveaComment on ခ်စ္သူအေၾကာင္း ဖြင့္ဟေျပာျပလာတဲ့ မင္းသား ေနတိုး
Zawgyi ခ်စ္သူအေၾကာင္း ဖြင့္ဟေျပာျပလာတဲ့ မင္းသား ေနတိုး လက္ရွိမွာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးက ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ခ်စ္ခင္အားေပးမႈကို ရရွိထားတဲ့ မင္းသားတစ္လက္ကေတာ့ ေနတိုးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဟာသေရာ၊ ဒရာမာပါ ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္သ႐ုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး အကယ္ဒမီဆုေတြကိုလည္း ဆြတ္ခူးရရွိထားတဲ့ ပရိသတ္အခ်စ္ေတာ္ ေနတိုးကေတာ့ လူပ်ိဳႀကီးဘဝကေန ကြၽတ္ဖို႔ နီးစပ္လာလို႔ လာၿပီလို႔ ဆိုရမွာပါ။ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အိမ္ေထာင္ျပဳရမယ့္အ႐ြယ္ထက္ ေက်ာ္ေနၿပီလို႔ ထင္ပါတယ္ဆိုတဲ့ မင္းသားေနတိုးက သူ႔နဲ႔ရင္းႏွီးတဲ့ မိတ္ေဆြေတြျဖစ္တဲ့ ေက်ာ္ေက်ာ္ဗိုလ္တို႔မိသားစုကိုျမင္ရင္ အားက်မိၿပီး “အိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔ ေလးနက္တဲ့အခ်ိန္တစ္ခုေရာက္လာၿပီ” လို႔ ဆိုပါတယ္။သူ႔ရဲ႕ခ်စ္သူကေတာ့ အႏုပညာေလာကကမဟုတ္ဘဲ ျပင္ပေလာကကျဖစ္တယ္လို႔ ျပည္တြင္းသတင္းမီဒီယာေတြနဲ႔ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုမွာ ေျဖဆိုထားပါတယ္။အိမ္ေထာင္ျပဳမယ့္အခ်ိန္ကိုေတာ့ ေျပာရမွာေစာေနေသးပါတယ္ဆိုတဲ့ မင္းသားေနတိုးကေတာ့ လူပ်ိဳႀကီးဘဝကေန ကြၽတ္ဖို႔ နီးစပ္လာပါၿပီ။ ပရိသတ္ႀကီးကေရာ မင္းသားေနတိုးကို လူပ်ိဳႀကီးအျဖစ္က ကြၽတ္ေစခ်င္ၿပီလား … ဒီတိုင္းေလးပဲရွိေစခ်င္ေသးလား …. Unicode ချစ်သူအကြောင်း […]
ရောက်တဲ့နေရာလေးမှာ အတူနေရဲဘော်တွေကို ဝါသနာလေးနဲ့ ဖြေဖျော်နေရှာတဲ့ မူးလာ
September 16, 2021 aung aungLeaveaComment on ရောက်တဲ့နေရာလေးမှာ အတူနေရဲဘော်တွေကို ဝါသနာလေးနဲ့ ဖြေဖျော်နေရှာတဲ့ မူးလာ
ရောက်တဲ့နေရာလေးမှာအတူနေရဲဘော်တွေကိုဝါသနာလေးနဲ့ဖြေဖျော်နေရှာတဲ့မူးလာ မြန်မာအိုင်ဒေါအစီအစဉ်ကနေပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခြင်းကိုရရှိထားသူလေးထဲမှာမူးလာတစ်ယောက်လဲအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်နော်။မူးလာကတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံလေးတွေနဲ့သီဆိုတတ်သူဖြစ်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်းစနောက်တတ်သူဖြစ်တာကြောင့်အားလုံးကြားမှာလည်းအချစ်ခံနေရသူဖြစ်ပါတယ် နော်မူးလာကတော့ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းတွေနဲ့အနုပညာလောကထဲထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့လက်ရှိမှာလွတ်မြောက်နယ်မြေကို ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အရေးတော်ပုံကြီးစတင်ခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလအစပိုင်းကတည်းကလမ်းပေါ်ထွက်လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာတက်တက်ကြွကြွပါဝင်ခဲ့သလိုအခု အချိန်မှာလည်းလက်နက်ကိုင်ရင်းပြည်သူတွေအတွက်ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။မူးလာကတော့လွတ်မြောက်နယ်မြေရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာလည်းသီချင်းတွေရေးကာသူ့ရဲ့အနုပညာအလုပ်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုစိတ်ခွန်အားပေးတာတွေလည်းလုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျရာတာဝန်ကနေ အစွမ်းကုန်ကြိုးပါဝင်နေတဲ့မူးလာဟာဒီနေ့မှာလည်းမူးလာမှာအတူနေနေတဲ့ရဲဘော်လေးတွေကိုဂစ်တာတီးပြီးသီချင်းဆိုပြနေတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုတင်ပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မူးလာကတော့ဂစ်တာတီးတဲ့လက်တွေနဲ့သေနတ်ကိုင်ပြီးကျရာနေရာလေးမှာဖြစ်သလိုနေတတ်တဲ့မူးလာရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုချစ်တဲ့ ပရိသတျတှကေလညျးအားပေးစကားပွောပေးထားတာဖွဈပါတယျ။ Cele Worldပရိသတျကွီးလညျးမူးလာရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကွည့ျပွီး အားပေးစကားလေးတဈခုခုလောကျရေးပေးခဲ့ကွပါအုံးနောျ Zawgyi ရောက်တဲ့နေရာလေးမှာအတူနေရဲဘော်တွေကိုဝါသနာလေးနဲ့ဖြေဖျာ်နေရှာတဲ့မူးလာလာ မြန်မာအိုင်ဒေါအစီအစဉ်ကနေပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခြင်းကိုရရှိထားသူလေးထဲမှာမူးလာတစ်ယောက်လဲအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်နော်။မူးလာကတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံလေးတွေနဲ့သီဆိုတတ်သူဖြစ်ပြီးသူငယ်ချင်းတွေကိုလည်းစနောက်တတ်သူဖြစ်တာကြောင့်အားလုံးကြားမှာလည်းအချစ်ခံနေရသူဖြစ်ပါတယ်နော် မူးလာကတော့ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းတွေနဲ့အနုပညာလောကထဲထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့လက်ရှိမှာလွတ်မြောက်နယ်မြေကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အရေးတော်ပုံကြီးစတင်ခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလအစပိုင်းကတည်းကလမ်းပေါ်ထွက်လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာတက်တက်ကြွကြွပါဝင်ခဲ့သလိုအခုအချိန်မှာလည်း လက်နက်ကိုင်ရင်းပြည်သူတွေအတွက်ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။မူးလာကတော့လွတ်မြောက်နယ်မြေရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာလည်းသီချင်းတွေရေးကာသူ့ရဲ့အနုပညာအလုပ်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုစိတ်ခွန်အားပေးတာတွေလည်းလုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျရာတာဝန်ကနေအစွမ်းကုန်ကြိုးပါဝင်နေတဲ့မူး လာဟာဒီနေ့မှာလည်းမူးလာမှာအတူနေနေတဲ့ရဲဘော်လေးတွေကိုဂစ်တာတီးပြီးသီချင်းဆိုပြနေတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုတင်ပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မူးလာကတော့ဂစ်တာတီးတဲ့လက်တွေနဲ့သေနတ်ကိုင်ပြီးကျရာနေရာလေးမှာဖြစ်သလိုနေတတ်တဲ့မူးလာရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းအားပေးစ ကားပြောပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။Cele Worldပရိသတ်ကြီးလည်းမူးလာရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအားပေးစကားလေးတစ်ခုခုလောက်ရေးပေးခဲ့ကြပါအုံးနော် Crd
ချစ်သူနှစ်ဦးဟာ ရေတံခွန်လေးပေါ် ထိုင်ကာ တီတီတာတာ ပလီပလာတွေပြောရင်း ကြည်နူးနေကြရာမှ ရုတ်တရက်
September 16, 2021 aung aungLeaveaComment on ချစ်သူနှစ်ဦးဟာ ရေတံခွန်လေးပေါ် ထိုင်ကာ တီတီတာတာ ပလီပလာတွေပြောရင်း ကြည်နူးနေကြရာမှ ရုတ်တရက်
ချစ်သူနှစ်ဦးဟာ ရေတံခွန်လေးပေါ် ထိုင်ကာ တီတီတာတာ ပလီပလာတွေပြောရင်း ကြည်နူးနေကြရာမှ ရုတ်တရက် ကောင်မလေးက ကောင်လေးကို ညှို့အားပြင်းတဲ့ မျက်လုံးတစ်စုံနဲ့ကြည့်ပြီး မေးခွန်းလေးတစ်ခု မေးလိုက်တယ်.. “ ကို…တကယ်လို့များ ကမ္ဘာကြီး နှစ်ခြမ်းကွဲသွားရင်.. ဘယ်အခြမ်းမှာ နေမှာလဲဟင်….. ” ကောင်လေးက အနည်းငယ် စဉ်းစားလိုက်ပြီး.. “ခက်တာပဲ…ချစ်ရယ်တဲ့…အဲသလိုတာ ကမ္ဘာကြီး နှစ်ခြမ်း ကွဲသွားရင် တစ်ခြမ်းမှာက ကို သိပ်ချစ်ရတဲ့မင်း၊ တစ်ခြမ်းမှာက ကို…တန်ဖိုးထားရတဲ့ မိဘတွေ ဖြစ်နေရင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ”တဲ့။ ကောင်မလေးက နှုတ်ခမ်းလေး စူပြီး…“ မရဘူးကွာ ! ကို …တစ်ဖက်ဖက်ကိုတော့ ပြတ်ပြတ်သားသား ရွေးရမယ် ”ဆိုပြီး ကောင်လေးကို ရစ်တယ်။ ကောင်လေးလည်း ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြတ်ပြတ်သားသား ချပြီးပြောလိုက်တယ်။ “ချစ်ရယ်.. မင်းရှိတဲ့အခြမ်းကို ရွေးရင်လည်း […]
September 16, 2021 aung aungLeaveaComment on ဒီကာလမှာ ခက်ခဲလို့ မင်းသမီးတွေအိမ် ဆန်လေးသွားရောင်းတာ အားမပေးတဲ့အပြင် အိမ်ထဲတောင်ပေးမဝင်လို့ ငိုကြွေးနေတဲ့ ကျော်ထူး
ဒီကာလမှာ ခက်ခဲလို့ မင်းသမီးတွေအိမ် ဆန်လေးသွားရောင်းတာ အားမပေးတဲ့အပြင် အိမ်ထဲတောင်ပေးမဝင်လို့ ငိုကြွေးနေတဲ့ ကျော်ထူး ဒီကာလမှာ ခက်ခဲလို့ မင်းသမီးတွေအိမ် ဆန်လေးသွားရောင်းတာအားမပေးတဲ့အပြင် အိမ်ထဲတောင်ပေးမဝင်လို့ ငိုကြွေးနေတဲ့ ကျော်ထူးမင်းသားမင်းသ.မီးတွေက သူ့ကို အိမ်ထဲတောင် အဝင်မခံကြတဲ့အကြော.င်း ပြောပြလာ.တဲ့သရုပ်ဆာင် ကျော်ထူးသရုပ်ဆောင် ကျော်ထူး တစ်ယောက် ကတော့ သရုပ်ဆောင် လောကမှာ သာမ က သဘင်ပညာဘက်. မှာလည်းလူရွှင်တော် ကျော်ထူး အဖြစ်ပါ အောင်မြင်တဲ့ နုပညာသည်တစ်ဦးဖြစ်ပါ တယ်နော် ။ အခုလို ကိုဗစ် .ကာလမှာရိုက်ကူးရေးတွေ ရပ်နားတဲ့ အပေးမှာ လည်း အနုပညာရှင်ဇာတ်ပို့ ဇာတ်ရ​ေတွမှာ အတော်လေးကို စားဝတ်ေ.နရေး ခက်ခဲ လှပါ တယ်.ရိုကျကူးရေးတှေ မရှိတော့ ဝငျငှေေ.တှ ရပျတန့ျခြိနျမှာရုပျရှငျ မငျးသား မငျး.သမီးတှကေအစဟငျးေရာင်း ထမင်းရော.င်းကြ ရတဲ့ […]
ဘယ်တော့မှ ရုပ်ရှင် င်းသမီး တစ်ယောက်အဖြစ် အနုပညာ လောကထဲ ဝင်မလာတော့ဘူး လို့ စိတ်နာနာနဲ့ ပြောလိုက်တဲ့ နဝရတ်
September 16, 2021 aung aungLeaveaComment on ဘယ်တော့မှ ရုပ်ရှင် င်းသမီး တစ်ယောက်အဖြစ် အနုပညာ လောကထဲ ဝင်မလာတော့ဘူး လို့ စိတ်နာနာနဲ့ ပြောလိုက်တဲ့ နဝရတ်
ဘယ်တော့မှ ရုပ်ရှင် င်းသမီး တစ်ယောက်အဖြစ် အနုပညာ လောကထဲ ဝင်မလာတော့ဘူး လို့ စိတ်နာနာနဲ့ ပြောလိုက်တဲ့ နဝရတ် တိမ်မင်းလသမီးရဲ့ ဒဏ္ဍာရီ ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီးနဲ့ ရုပ်ရှင်လော က မှာနောက်ဆုံး အနေ နဲ့ တွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့ နဝရတ် ဟာ သူတောင်းစား ကာရိုက်တာကနေ သူဌေးသမီး ကာရှိုက်တာ အဆုံးထိဟာကွက် တစ်ခုမရှိပဲ ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်သူ မင်းသမီး တစ်လက် ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဖန်တီးပြခဲ့တဲ့ အနုပညာကို အစကနေ အဆုံးထိ တာဝန်ယူမှု အပြည့်ရှိခဲ့ပြီး ၁၅နှစ်တာ အချိန်ကာလပတ်လုံး သူမရဲ့နုငယ်ပျို မြစ်မှုတွေနဲ့ အလှတွေကို နှစ်မြုပ် ထားကာ ပရိသတ် အသုံးတော်ခံ သရုပ်ဆောင် ပြခဲ့သူပါ။ငွေကြေး ဓနပြည့်စုံတဲ့ မင်းသမီး တစ်ယောက်ဖြစ်သော်လည်း […]
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာနာမည္ႀကီးေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက အႏုပညာ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ား
September 15, 2021 aung aungLeaveaComment on တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာနာမည္ႀကီးေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက အႏုပညာ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ား
တရုတ်နိုင်ငံမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက အနုပညာ တော်လှန်ရေးသမားများ စိုင်းစိုင်းခမ်းလိုင်၊ ပိုင်တံခွန်၊ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်နဲ့ သူဇာဝင့်လွင့် တို့လေးယောက်ကတော့အနုပညာလောက မှာ အောင်မြင်မှုကိုယ်စီရရှိနေကြတဲ့ပရိသတ်အချစ်တော်လေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်။သူတို့လေးယောက်လုံး ကလတ်တလောမှာ ဆိုရင် ပြည်သူပရိသတ်တွေဘက်ကနေ အခိုင်အမာရပ်တည်ပေးနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။လူထုရဲ့ဆန္ဒနဲ့အတူ တစ်သားတည်း ထပ်တူကျတဲ့ သူတို့လေးယောက်ကပြည်သူ တစ်ယောက်နေရာကနေ ကိုယ့်နိုင်ငံအကျိုးအတွက်တာဝန်ကျေပွန်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်တံခွန်ဟာဆိုရင် လူထုလှုပ်ရှားမှု တွေမှာ နေ့တိုင်းလိုလို ရဲဝင့်တက်ကြွစွာပါဝင်ပြီး ပြည်သူလူထုကို အရှေ့ဆုံး ကနေ ကာကွယ်ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ရွှေကစ်အနေနဲ့ကလည်းတရားစခန်းကပြန်ရောက်ရောက်ချင်းမှာပဲ ပြည်သူတွေ နဲ့ အတူလမ်းပေါ်ထွက်ပြီး ရင်တွင်းဆန္ဒတွေကို ဖော်ပြတောင်းဆိုခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။“Miss Universe Myanmar 2020” ရဲ့သရဖူပိုင်ရှင်လေးဖြစ်တဲ့ အလှမယ်သူဇာဝင့်လွင်ကတော့ ဖေဖော်ဝါရီ လအစပိုင်းကတည်းက လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ မရပ်မနားပါဝင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။စိုင်းစိုင်းကတော့ လမ်းပေါ်က ပြည်သူတွေအမော ပြေသောက်ဖို့ အချိုရည်တွေနဲ့ ရေသန့်တွေ လှူဒါန်းခဲ့သလို […]
September 14, 2021 aung aungLeaveaComment on မနေ့က အမေစုရဲ့ကျန်းမာရေးသတင်းကိုကြားသိလိုက်ရတာကြောင့် နေကောင်းကျန်းမာနေဖို့အတွက် အမြဲဆုတောင်းပေးနေတဲ့ အဆိုတော် R ဇာနည်
အဆိုတော် R ဇာနည် ကတော့ နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေလှုပ်ရှားခဲ့တာဖြစ်လို့ အခုချိန်မှာသူ့ရဲ့လုံခြုံရေးကို ဂရုစိုက်နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ် မိသားစုအတွက်လည်း အန္တရာယ်ကင်းအောင်လို့ အခုချိန်မှာ R ဇာနည်က အဝေးတစ်နေရာကို ရောက်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။R ဇာနည်က မိသားစုနဲ့ခွဲခွါပြီး တိမ်းရှောင်နေရပေမယ့် ပြည်သူတွေနဲ့တစ်သားတည်းရပ်တည်ပြီး ပန်းတိုင်ဆီကို အတူတူလျှောက်လှမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ် ဒါ့အပြင် လွတ်မြောက်နယ်မြေရောက်ရှိနေကြတဲ့ ပြည်သူတွေနဲ့ အနုပညာရှင်တွေကလည်း တတ်နိုင်တဲ့နေရာကနေကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ် မနေ့ကဆိုရင် အမေစုရဲ့ရုံးချိန်းနေ့ဖြစ်ပြီး တရားရုံးသွားရင်း ခေါင်းမူးလို့ပြန်လှည့်လာခဲ့ရတဲ့သတင်းကို ပြည်သူတွေကြားသိခဲ့ရပါတယ် ဒါ့ကြောင့် အမေစုရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက် ပြည်သူတွေကစိုးရိမ်ပူပန်နေကြပြီး အမြန်နေကောင်းကျန်းမာဖို့အတွက် ဆုတောင်းပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ် R ဇာနည်ကလည်း အမေစုကို လေးစားချစ်ခင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် နေ့တိုင်းလိုလို နေကောင်းကျန်းမာဖို့ဆုတောင်းပေးနေကျဖြစ်ပါတယ် ပြည်သူတွေလည်း အခုချိန်မှာ အခက်အခဲ၊အတားအဆီးတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပေမယ့် အမေစုကိုလည်း စိတ်ပူနေကြတာဖြစ်ပါတယ် R ဇာနည်လိုပဲ တချို့ပြည်သူတွေက အမေစုရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကောင်းမွန်ဖို့ ဘုရားရှိခိုးတိုင်းဆုတောင်းပေးနေကြကြောင်းကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် Unicode အဆိုတော် […]
ေျပတီဦးႏွင့္အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္စလုံးအတြက္​ ဝမ္းသာစရာသတင္းေကာင္းႀကီးေၾကညာသြားခဲ့ၿပီဟုသိရ (႐ုပ္​သံဖုိင္​)
September 14, 2021 aung aungLeaveaComment on ေျပတီဦးႏွင့္အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္စလုံးအတြက္​ ဝမ္းသာစရာသတင္းေကာင္းႀကီးေၾကညာသြားခဲ့ၿပီဟုသိရ (႐ုပ္​သံဖုိင္​)
ျပည္​သူခ်စ္​မင္​းသားနဲ႔မင္​းသမီးဇနီး​ေမာင္​ႏွံႏွစ္​ဦးျဖစ္​ၾက​ေသာ ေျပတီဦးႏွင့္အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္ႏွစ္ေယာက္စလုံးတဲ့ ဝမ္းသာစရာသတင္းေကာင္းႀကီး​ ​ေၾကညာသြားၿပီ၊ လုိင္​း​ေပၚတြင္​ပ်ံ႕ႏွံ႔​ေန​ေသာသတင္​းတခုသာျဖစ္​ပါ၍ခ်င္​့ခ်ိန္​ၿပီးယုံ​ေပးၾကပါ​ေနာ္​။ တကယ္​အမွန္​သာျဖစ္​ခဲ့မည္​ဆုိလွ်င္​​ေတာ့ သူတုိ႔ႏွစ္​ဦးရဲ႕ပရိတ္​သတ္​မ်ားအျပင္​ျပည္​သူမ်ားကပါဝမ္​းသာၾကမွာမလြဲပါဘူးဗ်ာ။ မၾကာခင္​မွာမွန္​လားမွ.ားလားသိရ​ေတာ့မယ္​လုိ႔ထင္​မိပါတယ္​​ ​ေနာ္​။ ပရိတ္​သတ္​ႀကီး​ေရာဘယ္​လုိထင္​လည္​းဆုိတာ​ေလး​ေတြ​ေရး​ေပးခဲ့ၾကပါဦး​ေနာ္​။ ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္​ေဖၚျပထားပါသည္။ ဖတ္​႐ွဳ႕​ေပးၾကတဲ့ ျမန္မာျပည္သူ/သားမ်ားအားလုံးစစ္အာဏာရွင္လက္ေအာက္က​ေန အျမန္ဆုံးလြ.တ္ေျမာက္ၾကပါေစလို႔ဆုေတာင္း​ေပးလိုက္ရပါတယ္။ ခရက္​ဒစ္​ SAI ယူနီကုဒ္ျဖင္႔ ဖတ္ရန္ ပြည်သူချစ်မင်းသားနဲ့မင်းသမီးဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဖြစ်ကြသော ပြေတီဦးနှင့်အိန္ဒြာကျော်ဇင်နှစ်ယောက်စလုံးတဲ့ ဝမ်းသာစရာသတင်းကောင်းကြီး ကြေညာသွားပြီ၊ လိုင်းပေါ်တွင်ပျံ့နှံ့နေသောသတင်းတခုသာဖြစ်ပါ၍ချင့်ချိန်ပြီးယုံပေးကြပါနော်။ တကယ်အမှန်သာဖြစ်ခဲ့မည်ဆိုလျှင်တော့ သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ပရိတ်သတ်များအပြင်ပြည်သူများကပါဝမ်းသာကြမှာမလွဲပါဘူးဗျာ။ မကြာခင်မှာမှန်လားမှ.ားလားသိရတော့မယ်လို့ထင်မိပါတယ် နော်။ ပရိတ်သတ်ကြီးရောဘယ်လိုထင်လည်းဆိုတာလေးတွေရေးပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။ ဗီဒီယိုဖိုင်အားအောက်တွင်ဖေါ်ပြထားပါသည်။ ဖတ်ရှု့ပေးကြတဲ့ မြန်မာပြည်သူ/သားများအားလုံးစစ်အာဏာရှင်လက်အောက်ကနေ အမြန်ဆုံးလွ.တ်မြောက်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်။ ခရက်ဒစ်
September 14, 2021 aung aungLeaveaComment on ဒူဘိုင်းမြို့ရဲ့ အလှတရားတွေကိုခံစားကြည့်ရှုဖို့ ရဟတ်ယာဉ်ကြီးစီးကာ မြန်မာပြည်မှထွက်ခွာသွားတဲ့ နန်းမွေစံ
ပရိသတ်ကြီးရေ မော်ဒယ် နန်းမွေစံကတော့ လက်ရှိမှာ ဒူးဘိုင်းနိုင်ငံကို အလည်အပတ်ရောက်ရှိနေပါတယ်နော်။သူမဟာ ဒူဘိုင်းကို မရောက်ခင် ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့မှာ လည်ပတ်ခဲ့ပါသေးတယ်နော်။ ဒီကာလမှာ ပြည်ပနိုင်ငံကို ခရီးထွက် ဖို့ဆိုတာ တော်ရုံနဲ့ မရလောက်ပါဘူးနော်။ နန်းမွေစံကတော့ ပြည်တွင်းမှာ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေ မရှိတော့တာကြောင့် သူမရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်တွေကိုကြည့်ရှုဖို့ကိုယ်ပိုင် website ထောင်ပြီး member ကြေးသွင်းခိုင်းပြီး အားပေးနိုင်အောင် စီစဉ်ထားတာပါနော်။ကိုယ်ပိုင် website မှ ရတဲ့ ငွေကြေးများနဲ့ အိမ်ပိုင်တစ်လုံးကိုတောင် ရရှိပိုင် ဆိုင်ထားနိုင်ခဲ့ပါပြီနော်။ အခုလည်း ဒူဘိုင်းတစ်မြို့လုံးရဲ့ ရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့ အလှတရားတွေကို ဟယ်ရီကော်ပတာပေါ်ကနေအသေးစိတ်ကြည့်ရှုခံစားနေတဲ့ နန်းမွေစံရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကို တင်ပေးလာခဲ့ပါပြီနော်။ နန်းမွေစံတစ်ယောက် အရမ်းကိုပျော်ရွှင်နေတာကိုလည်း ဗီဒီယိုထဲမှာ မြင်တွေ့ကြရမှာပါနော်။ ကဲ ပရိသတ်ကြီးလည်း အားပေးကြည့်ရှု လို့ရအောင်အခုပဲ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီနော်။ Zawgyi ပရိသတ္ႀကီးေရ […]
သူမရဲ့ အသက် (၂၈) နှစ်မှာ ကြီးမားတဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုကို ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့လို့ အတိုင်းမသိ ပီတိဖြစ်နေတဲ့ ဘေဘီမောင်
September 14, 2021 aung aungLeaveaComment on သူမရဲ့ အသက် (၂၈) နှစ်မှာ ကြီးမားတဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုကို ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့လို့ အတိုင်းမသိ ပီတိဖြစ်နေတဲ့ ဘေဘီမောင်
ပရိသတ်တွေ အပေါ်မှာ ဖော်ဖော်ရွေရွေနဲ့ တလေးတစား ဆက်ဆံပြီး လူတိုင်းအပေါ်မှာလည်း ကူညီချင်စိတ်ရှိသူကတော့ မင်းသမီးချောလေး ဘေဘီမောင်ပါပဲ ။ အလှူအတန်းတွေလည်း အမြဲမပြတ် ပြုလုပ်ကာ အရေးကြုံတဲ့ အခါတိုင်းမှာလည်း ပြည်သူတွေဘက်မှ ရပ်တည်ပေးသူ အနုပညာရှင်တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာလည်း သူမရဲ့ အသက် (၂၈) နှစ်မှာ ကြီးမားတဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှု တစ်ခုကို ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့လို့ ဝမ်းသာပီတိဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်းလေးဝေမျှလာပါတယ် ။ ဒါကတော့ ပဲခူးမြို့ သီရိဇေယျာကျောင်းတိုက်မှာသီတင်းသုံးနေထိုင်တဲ့ဆရာတော် ဦးနန္နိယအား တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့ Mark-x ကားတစ်စီးကို လှူဒါန်းခဲ့ တဲ့ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အလှူရေစက်ချနေတဲ့ ပုံရိပ်တွေနဲ့ အတူ ” 2019.6လပိုင်းက ပဲခူးမြို့ သီရိဇေယျာကျောင်းတိုက်မှာသီတင်းသုံးနေထိုင်တဲ့ဆရာတော် ဦးနန္နိယအား မော်တော်ယဉ် Mark-xကားလေး ရေစက်ချ လှူဒါန်းကုသိုလ်လေးပါ […]